N'oge okpomọkụ nke afọ 2009, ekwentị na-agagharị na Rwanda. Na mgbakwunye na ọtụtụ nde oku sitere na ndị ezinụlọ, ndị enyi, na ndị mmekọ azụmahịa, ihe dị ka 1,000 ndị Rwandan natara oku site n'aka Joshua Blumenstock na ndị ọrụ ibe ya. Ndị a na-eme nchọpụta na-amụ akụ na ụba na ịda ogbenye site na nyochaa otu nyocha nke ndị mmadụ site na nchekwa data nke nde mmadụ 1.5 nke ndị na-eweta ekwentị mkpanaka kachasị na Rwanda. Ndị isi na ndị ọrụ ibe ha jụrụ ndị mmadụ a na-ahọpụtaghị na ha ma ọ bụrụ na ha chọrọ isonye na nyocha, kọwaara ha nchọpụta ahụ, wee jụọ ọtụtụ ajụjụ gbasara àgwà mmadụ, mmekọrịta mmadụ na ibe, na akụnụba.
Ihe niile m kwuru n'oge a na-eme ka nke a dị ka nchọpụta ọdịnala gbasara sayensị. Ma, ihe na-esote ọ bụghị omenala-ma ọ dịghị ihe ọzọ ma ọ bụghị. Na mgbakwunye na data nyocha ahụ, Blumenstock na ndị ọrụ ibe ya nwekwara ndekọ ndekọ zuru ezu maka nde mmadụ 1.5. Na-ejikọta isi mmalite data abụọ a, ha jiri data nyocha iji zụọ igwe na-amụta ihe iji kọwaa akụ na ụba nke mmadụ na-adabere na ndekọ ndekọ ha. Ọzọ, ha jiri ihe atụ a mee atụmatụ na akụ ndị ahịa nile dị nde 1.5 dị na nchekwa data ahụ. Ha na-atụlekwa ebe obibi nke nde ndị ahịa 1.5 nde na-eji ozi ala ahụ agbakwunyere na ihe ndekọ oku. Na-etinye ihe a nile ọnụ-akụ na-eme atụmatụ na ebe obibi ebe a tụrụ anya-ha nwere ike ịmepụta map ndị dị elu nke nkesa akụ na ụba na Rwanda. Karịsịa, ha nwere ike ịmepụta atụmatụ ọgaranya maka mkpụrụ ọ bụla nke mkpụrụ ndụ 2,148 nke Rwanda, nke kacha nta nhazi nchịkwa na mba ahụ.
N'ụzọ dị mwute, ọ gaghị ekwe omume ikwenye na izi ezi bụ atụmatụ ndị a n'ihi na ọ dịtụbeghị onye ọ bụla mepụtara atụmatụ maka obere ebe ndị dị na Rwanda. Ma, mgbe Blumenstock na ndị ọrụ ibe ha chịkọtara atụmatụ ha na mpaghara 30 nke Rwanda, ha chọpụtara na atụmatụ ha dị nnọọ ka atụmatụ si na nchọpụta nke Demographic na Health, nke a na-ewere dịka ọkwa nyocha nke mba ndị ka na-emepe emepe. Ọ bụ ezie na ụzọ abụọ a na-emepụta atụmatụ dị otú ahụ na nke a, ọbịbịa nke Blumenstock na ndị ọrụ ibe ya dị ihe dị ka okpukpu 10 karịa ngwa ngwa ma dị 50 karịa ọnụ ala karịa Mmasị Omume na Ahụ Ike. Ndị a na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa ma dị ala na-eme ka ndị nchọpụta, ndị gọọmentị, na ndị ụlọ ọrụ dị iche iche nwee ohere ọhụrụ (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) .
Ọmụmụ ihe a dị ka nyocha nke inkblot Rorschach: ihe ndị mmadụ na-ahụ na-adabere n'azụ ha. Ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na- ahụ maka ndị mmadụ na- ahụ ngwá ọrụ ọhụrụ nke a pụrụ iji mee ihe iji nwalee echiche banyere mmepe akụ na ụba. Ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na- ahụ maka nchọpụta na-ahụ nsogbu nsogbu igwe ọhụrụ. Ọtụtụ ndị na- azụ ahịa na- ahụ ụzọ dị ike maka njedebe na-ekpughe na nnukwu data ha nakọtara. Ọtụtụ ndị na- akwado nzuzo na- ahụ ncheta na-atụ egwu na anyị na-ebi n'oge nlekọta nyocha. N'ikpeazụ, ọtụtụ ndị na-eme iwu na- ahụ ụzọ nke nkà na ụzụ ọhụrụ nwere ike isi nyere aka kee ụwa ka mma. N'ezie, nchọpụta a bụ ihe ndị ahụ nile, nakwa n'ihi na ọ nwere ngwakọta nke njirimara, m na-ahụ ya dị ka windo n'ọdịnihu nke nyocha mmadụ.